Kedu otu mkpebi ụlọ ọrụ na-agbakwụnye uru na usoro ịzụ ahịa gị | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa B2B - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 27% - kwetara na data ezughi oke riri ha 10%, ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ, ọbụna karịa na mfu ego ha nwetara kwa afọ.
Nke a na-egosipụta n'ụzọ doro anya okwu dị mkpa nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa chere ihu taa, ya bụ: adịghị mma data. Data ezughi oke, efu, ma ọ bụ adịghị mma nwere ike inwe nnukwu mmetụta na ọganiihu nke usoro ịzụ ahịa gị. Nke a na-eme ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ngalaba niile na ụlọ ọrụ - mana kpọmkwem ahịa na ịre ahịa - bụ data nhazi na-akwalite nke ukwuu.
Ma ọ bụ zuru ezu, 360-ele ndị ahịa gị, ndị na-edu, ma ọ bụ atụmanya, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ metụtara ngwaahịa, onyinye ọrụ, ma ọ bụ adreesị ebe - ahịa bụ ebe ọ na-agbakọta ọnụ. Nke a bụ ya mere ndị na-ere ahịa na-ata ahụhụ karịa mgbe ụlọ ọrụ anaghị eji usoro njikwa njikwa data kwesịrị ekwesị maka ịkọwapụta data na-aga n'ihu na idozi ogo data.
Na blọọgụ a, achọrọ m ịdọrọ uche gaa na nsogbu njirimara data kachasị emetụta yana otu o si emetụta usoro mgbasa ozi gị dị oke mkpa; anyị ga-eleba anya n'ihe ngwọta maka nsogbu a, na n'ikpeazụ, anyị ga-ahụ ka anyị nwere ike isi guzobe ya na-aga n'ihu.
Ya mere, ka anyi malite!
Nsogbu Ọdịmma Data Kachasịnụ nke ndị ahịa chere ihu
Agbanyeghị, ogo data adịghị mma na-akpata ọtụtụ nsogbu maka ndị na-ere ahịa n'otu ụlọ ọrụ, mana na-enyefe ndị ahịa 100 ihe ngwọta data, ihe kacha emetụta àgwà data nke anyị ahụla ka ndị mmadụ na-eche ihu bụ:
Inweta otu nlele nke akụrụngwa data isi.
Okwu a na-apụta mgbe echekwara ndekọ oyiri maka otu ihe. N'ebe a, okwu ahụ nwere ike ịpụta ihe ọ bụla. Ọtụtụ n'ime, n'akụkụ nke ire ahịa, okwu ụlọ ọrụ nwere ike na-ezo aka: ahịa, ndu, atụmanya, ngwaahịa, ọnọdụ, ma ọ bụ ihe ọzọ bụ isi na arụmọrụ nke gị ahịa.
Mmetụta nke ndekọ oyiri na usoro ịre ahịa gị
Ọnụnọ nke ndekọ oyiri na datasets ejiri maka ịzụ ahịa nwere ike bụrụ ihe nro maka onye ahịa ọ bụla. Mgbe ị nwere ndekọ oyiri, ndị a bụ ụfọdụ ọnọdụ dị njọ ị nwere ike ịbanye:
Oge efu, mmefu ego na mbọ - Ebe ọ bụ na ihe ndekọ data gị nwere ọtụtụ ndekọ maka otu ihe, ị nwere ike ịkwụsị itinye oge, mmefu ego na mgbalị ọtụtụ oge maka otu onye ahịa, atụmanya, ma ọ bụ ụzọ.
Enweghị ike ịkwado ahụmịhe ahaziri onwe ya - Ndekọ oyiri na-enwekarị akụkụ dị iche iche nke ozi gbasara otu. Ọ bụrụ na ị na-eduzi mgbasa ozi ahịa site na iji echiche na-ezughị ezu nke ndị ahịa gị, ị nwere ike ime ka ndị ahịa gị bụrụ ndị a na-anụbeghị ma ọ bụ ghọtahie.
Akụkọ ahịa na-ezighi ezi - Site na ndekọ data oyiri, ị nwere ike mechaa nye echiche na-ezighi ezi banyere mbọ ahịa gị na nloghachi ha. Dịka ọmụmaatụ, ị zitere email 100 ụzọ, mana ọ natara nzaghachi site na 10 - ọ nwere ike ịbụ na naanị 80 n'ime 100 ahụ pụrụ iche, na ndị ọzọ nke 20 bụ oyiri.
Mbelata arụmọrụ arụmọrụ yana nrụpụta ndị ọrụ - Mgbe ndị otu otu wetara data maka otu ụlọ ọrụ wee chọta ọtụtụ ndekọ echekwara n'ofe ebe dị iche iche ma ọ bụ gbakọtara ka oge na-aga n'otu ebe, ọ na-arụ ọrụ dị ka nnukwu mgbochi ụzọ na nrụpụta ndị ọrụ. Ọ bụrụ na nke a na-eme ọtụtụ oge, mgbe ahụ ọ na-emetụta arụmọrụ nke otu ụlọ ọrụ niile.
Enweghị ike ịme ntọghata ziri ezi - Ọ bụrụ na ịdekọla otu onye ọbịa ahụ dị ka ụlọ ọrụ ọhụrụ oge ọ bụla ha gara na ọwa mmekọrịta gị ma ọ bụ webụsaịtị gị, ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume ịme ngbanwe ziri ezi, wee mara kpọmkwem ụzọ onye ọbịa ahụ gbasoro ngbanwe.
Ozi anụ ahụ na eletrọnịkị na-enyefeghị - Nke a bụ ihe kacha akpata ndekọ oyiri. Dị ka e kwuru na mbụ, ndekọ nke ọ bụla oyiri na-achọkarị inwe echiche nke akụkụ nke ihe ahụ (nke mere na ndekọ ahụ ji bụrụ oyiri na dataset gị na mbụ). N'ihi nke a, ụfọdụ ndekọ nwere ike na-efunahụ ọnọdụ anụ ahụ, ma ọ bụ ozi kọntaktị, nke nwere ike ime ka ozi daa na nnyefe.
Kedu ihe bụ mkpebi ụlọ ọrụ?
Mkpebi ụlọ ọrụ (ER) bụ usoro nke ikpebi mgbe ntụaka maka ụlọ ọrụ dị adị n'ezie bụ otu (otu ụlọ ọrụ) ma ọ bụ na ọ bụghị otu (ụdị dị iche iche). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ usoro nke ịchọpụta na ijikọta ọtụtụ ndekọ na otu ihe mgbe a na-akọwa ihe ndekọ ahụ dị iche iche na nke ọzọ.
Mkpebi ụlọ ọrụ yana ogo ozi sitere n'aka John R. Talburt
Na-eme mkpebi nke ụlọ ọrụ n'ime data ịre ahịa gị
N'ịhụ mmetụta dị egwu nke oyiri na-aga nke ọma nke ọrụ ịre ahịa gị, ọ dị mkpa ịnweta usoro dị mfe ma dị ike. na-ewepu datasets gị. Nke a bụ ebe usoro nke mkpebi ụlọ ọrụ Na-abata. N'ikwu ya, mkpebi ụlọ ọrụ na-ezo aka na usoro nke ịchọpụta ndekọ nke otu ụlọ ọrụ ahụ.
Dabere na mgbagwoju anya na ọnọdụ ogo nke ihe ndekọ data gị, usoro a nwere ike ịnwe ọtụtụ usoro. Aga m ewere gị na usoro ọ bụla nke usoro a ka ị ghọta kpọmkwem ihe ọ gụnyere.
Mara: M ga-eji mkpụrụokwu 'entity' na-akọwa usoro dị n'okpuru. Mana otu usoro ahụ dị na ọ ga-ekwe omume maka ụlọ ọrụ ọ bụla metụtara usoro ịre ahịa gị, dị ka ndị ahịa, ndu, atụmanya, adreesị ebe, wdg.
Nzọụkwụ N'ime Usoro Mkpebi Ụlọ Ọrụ
Ịnakọta ndekọ data ụlọ ọrụ na-ebi na isi mmalite data dị iche iche - Nke a bụ nzọụkwụ mbụ na nke kachasị mkpa nke usoro ahụ, ebe ị na-achọpụta ebe A na-echekwa ndekọ ụlọ ọrụ kpọmkwem. Nke a nwere ike ịbụ data sitere na mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze, okporo ụzọ webụsaịtị, ma ọ bụ jiri aka tinye ya site na ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ahịa. Ozugbo achọpụtara isi mmalite ndị ahụ, a ga-achịkọta ndekọ niile ọnụ n'otu ebe.
Na-akọwapụta ndekọ jikọtara ọnụ - Ozugbo achịkọtara ihe ndekọ ahụ n'otu dataset, ọ bụ ugbu a oge ịghọta data ahụ wee kpughee nkọwa zoro ezo banyere nhazi ya na ọdịnaya ya. Profaịlụ data na-enyocha data gị nke ọma wee chọpụta ma ụkpụrụ data ezughi oke, oghere ma ọ bụ soro ụkpụrụ na usoro na-ezighi ezi. Ịmepụta ihe ndekọ data gị na-ekpughe ụdị nkọwa ndị ọzọ, ma gosipụta ohere ịsachapụ data.
Nhicha na ịhazi ndekọ data - Profaịlụ data dị omimi na-enye gị ndepụta nke ihe nwere ike ime maka ihicha na ịhazi dataset gị. Nke a nwere ike ịgụnye usoro iji mejupụta data na-efu, na-edozi ụdị data, nhazi usoro na usoro, yana ịkọwapụta ogige ndị dị mgbagwoju anya n'ime obere ihe maka nyocha data ka mma.
Dakọtara na ijikọ ndekọ nke otu ụlọ ọrụ - Ugbu a, ndekọ data gị dị njikere ijikọ ma jikọta ya, wee mechaa nke ndekọ nke otu ụlọ ọrụ. A na-eme usoro a site n'itinye ụkpụrụ algọridim maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ nke na-arụkọ ọrụ nke na-eme egwuregwu kpọmkwem na njirimara pụrụ iche, ma ọ bụ egwuregwu na-enweghị isi na nchikota njirimara nke ihe. Ọ bụrụ na nsonaazụ sitere na algọridim dabara adaba ezighi ezi ma ọ bụ nwee ezigbo ụgha, ị nwere ike ịmegharị algọridim ahụ nke ọma ma ọ bụ jiri aka tinye akara na-ezighi ezi dị ka oyiri ma ọ bụ na-abụghị nke oyiri.
Na-eme iwu maka ijikọ ụlọ ọrụ n'ime ndekọ ọla edo – Nke a bụ ebe ikpeazụ jikota eme. Eleghị anya ị chọghị idafu data gbasara ụlọ ọrụ echekwara n'ofe ndekọ, yabụ usoro a bụ maka ịhazi iwu iji kpebie:
Kedu ndekọ bụ ndekọ ndekọ na ebee ka oyiri ya dị?
Kedu njirimara sitere na oyiri ka ịchọrọ idetuo na ndekọ nna ukwu?
Ozugbo ahaziri ma mejuputa iwu ndị a, mmepụta bụ ihe ndekọ ọla edo nke ụlọ ọrụ gị.
Mepụta Nhazi Mkpebi Ụlọrụ na-aga n'ihu
Agbanyeghị na anyị gafere ntuziaka nzọụkwụ dị mfe maka idozi ụlọ ọrụ na dataset ahịa, ọ dị mkpa ịghọta na ekwesịrị ka ewere nke a dị ka usoro na-aga n'ihu na nzukọ gị. Azụmahịa ndị na-etinye ego n'ịghọta data ha na idozi isi okwu ịdịmma ya ka edobere maka uto na-ekwe nkwa karịa.
Maka mmejuputa ngwa ngwa na mfe nke usoro ndị dị otú ahụ, ị ​​nwekwara ike ịnye ndị na-ahụ maka data ma ọ bụ ọbụna ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ gị ngwa ngwa mkpebi ihe dị mfe iji, nke nwere ike iduzi ha site na usoro ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ikwu n'enweghị nsogbu na dataset na-enweghị oyiri na-arụ ọrụ dị ka onye ọkpụkpọ dị oke mkpa n'ịkwalite ROI nke ọrụ ahịa yana ịkwalite aha ika n'ofe ọwa ahịa niile.
Tags: ntughari àgwàihe omuma dataogo datadeduplificationdị iche ichendekọ oyirimbiputaraagabiga mbara igwemkpebi ụlọ ọrụerdatasets ahịamgbasa ozi ahịaotu iheihe
Otu esi akwado nkwenye email gị nke ọma (DKIM, DMRC, SPF)